ထိုင်းစတိုင် ပဲကြာဇံသုတ် | Wutyee Food House
« ၀က်သား ပေါက်စီ အိအိလေး
အားလူး ဆလတ်သုတ် »
March 26, 2010 by chowutyee ထိုင်းစတိုင် ပဲကြာဇံသုတ် (၂ယောက်စာ)
၃။ အားလူး – ၂လုံး (နူးအောင် ပြုတ်ပေးပြီး အရှည်လေးပြန်လှီးပေးပါ)
၄။ ခရမ်းချဉ်သီး – ၁လုံး ( အစေ့ထုတ်ပြီး အရှည်လှီးပေးပါ)
၅။ ပုဇွန်ခြောက် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း (ကျေညက်အောင် ထောင်းပေးပါ)
၆။ ငရုတ်သီးစိမ်း – ၁၀တောင့် (ကျေညက်အောင် ထောင်းပေးပါ)
၇။ ငရုတ်သီးမှုန့် – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်
၈။ နံနံပင် – တ၀က် ( ၅ပိုင်းပိုင်ပေးပါ)
၉။ ကြက်သွန်မြိတ် – ၁စည်း
၁၀။ သံပရာသီး – ၁လုံး (အကြီး)
၁၁။ မြေပဲ – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က် (မညက်တညက်ထောင်းထားပေးပါ)
၁၂။ ပဲငံပြာရည် အကြည် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁။ ရေနွေးဖျော်ပြီးသား ပဲကြာဇံကို ပန်းကန်ခွက် တစ်ခုထဲထည့်ပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ထောင်းထားသော ငရုတ်သီးစိမ်းများကို ထည့်နုယ်ပေးပါ။
၃။ ဒယ်ထဲ ဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်းထည့်ပြီး ငရုတ်သီးမှုန့် ထည့် ငရုတ်သီးဆီသပ်ပေးပါ။
၄။ ထိုဆီသပ်ထားသော ငရုတ်သီးအနှစ်များကို ပဲကြာဇံသုပ်သော ခွက်ထဲထည့်ပေးပါ။
၄။ ပြီးနောက် လှော်ထားသော ပုဇွန်၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ အားလူး၊ ပုဇွန်ခြောက်၊ မြေပဲ တို့ကို ထည့်ရောမွှေပေးပါ။
၅။ အရသာ အပေါ့အငံ့အတွက် ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ကြက်သားမှုန့် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ပဲငံပြာရည်၊ သံပရာသီး ၁လုံးကို ညှစ်ထည့်ပေးပါ။
၆။ ထို့နောက် အရသာ အနေတော်လျှင် အပေါ်မှ နံနံပင်၊ ကြက်သွန်မြိတ်တို့ ဖြူးပေးပြီး အားလုံးကို ရောမွှေလိုက်ပါ။
၇။ ထိုင်းစတိုင် ပဲကြာဇံသုပ် စပ်စပ်လေးကို စားသုံးနိုင်ပါပြီး…
Posted in ထိုင်းဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်း | 16 Comments	16 Responses
on March 26, 2010 at 2:11 pm | Reply thant
wutyee yay,thankalot4all ur post.sometimes no idea what2cook..i come here n see it from u..u kn???that’s why,,,,,2mrow i going2made this,,,it’s my favourite .
on March 27, 2010 at 4:45 am | Reply chowutyee
Thanksalot thant yay!!!😉
on March 26, 2010 at 2:30 pm | Reply Hmone Gyi
i never ate that one before but looking yummy so will try…
မှုံကြီး ကိုယ်ကြိုက်လောက်တဲ့ ရှရှဲရှဲလေး..း)
on March 26, 2010 at 6:59 pm | Reply kyel Zin
that loooks yummy mama =] thx for sharing
on March 27, 2010 at 4:48 am | Reply chowutyee
You r welcome Kyel Zin!!!😛
on March 26, 2010 at 9:50 pm | Reply zaw
ကြာဇံ သုပ်လေးက စားလို.တော.ကောင်းမှာသေခြာတယ် မြင်ရတာတောင် စားခြင်လာပြီ ။ ဘယ်လိုကြာဇံ နဲ.သုပ်ရမှာလဲး ဆန်ကြာဇံ နဲ.လား ပဲးကြာဇံ ခေါ် ဂျုံကြာဇံနဲ.လားဆိုတာလေးကိုပြောပါဦး ကျေးဇူးအထူးတင်ပျက် !!!!!!!!!!!!!
on March 27, 2010 at 4:47 am | Reply chowutyee
ဇော်ရေ ပဲကြာဇံနဲ့ သုပ်ထားတာပါ။ ဆန်ကြာဇံက ကြာဇံကြော်တဲ့ အခါတွေမှာ သုံးပါတယ်… စားသွားပါအုန်းနော်။ စားလို့ကောင်းတယ်…😉
on March 27, 2010 at 12:48 am | Reply leo
ပုဇွန်လေးတွေကို ပဲ ရွေးစားသွားတယ်နော်.. အဟီးးး.. ဗိုက်က ပြည့်နေလို့..း)
on March 27, 2010 at 5:09 am | Reply chowutyee
on March 27, 2010 at 9:13 pm | Reply zaw
ဟိုလူတော်တော်ဆိုးတဲ.လူဗျာ !!!! ပုဇွန်လေးတွေစားသွားတော. ကျန်တဲ.လူတွေဘာစားမလဲး ဒါပေမဲ.လေ မ၀တ်ရည် ရဲ. ကျိုးစာမှု. ကိုလေးစားလို. ကျန်တာလေးတွေကို ပုဇွန်မပါလဲး စားသွားပါတယ် ။ ကောင်းတယ်ဗျာ နောက် နေ.တွေလဲး အသစ်တင်တိုင်း အားပေးနေမယ် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ။
on March 28, 2010 at 2:08 am | Reply chowutyee
ဇော်ရေ နောက်လည်း အမြဲ လာအားပေးပါ… Thanks😉
on March 29, 2010 at 8:20 am | Reply လုလု
မမလု ထိုင်းပဲကြာဆံသုပ် လာအားပေးသွားတယ်နော်။
on March 29, 2010 at 8:33 am | Reply chowutyee
မလုလု ခုလို လာအားပေးသွားလို့ ကျေးဇူးပါပဲနော်…း)
on June 10, 2010 at 4:39 pm | Reply mya
i tried this one and i love love love it🙂
thanks for sharing. pls post more burmese salad (ah-thot).
looking forward your new recipes !
on June 13, 2010 at 5:55 am | Reply chowutyee
Thanks Ma Mya… I will post more burmese salad..🙂